Indlu esandula ukulungiswa entliziyweni yeBallisodare
I-townhouse yonke sinombuki zindwendwe onguDylan
I-Silverhill yindlu yedolophu entle yala maxesha nesanda kulungiswa egcinwe kwindawo entle nepholileyo yaseBallisodare Co. Sligo. Ifakwe kwiNdlela yeAtlantiki yasendle, ihombisa iimbono ezizolileyo zentaba yaseBenbulben, uya kuphangwa ukuze ukhethe kunye nehlathi elibukekayo lasekhaya kunye nokuhamba emilanjeni, iilwandle ezintle, kunye nentabalala yamathuba amnandi, konke kumnyango wakho. Eli khaya liqaqambileyo neligqitywe ngokugqibeleleyo lilungele ikhefu lelizwe losapho, iholide yothando okanye uhambo lweshishini.
Isanda kulungiswa ngo-2020, umrhwebi/umnini walapha uzingca kakhulu ngokuphefumla ubomi obutsha kule propathi ikhethekileyo kwindawo yokuhlala efanelekileyo. Le ndawo ekhululekile kwaye evulekileyo ilungele amaqela amancinci kunye neentsapho, le yindawo eqaqambileyo, kunye nekhaya langoku kwindawo enobuhlobo kunye noxolo kunye nedolophana.
Umgangatho ophantsi oyi-80m2 unekhitshi elivulekileyo elivulekileyo elivulekileyo kunye nendawo yokuhlala enesitayile, ecocekileyo, kunye neyanamhlanje.
- Ikhitshi lesiqingatha sorhwebo lixhotyiswe ngokupheleleyo: 4 ring hob yombane, microwave, i-oven engundoqo yombane, ifriji, ifriji/ifriji, isinki, kunye nequartz worktop.
- Ukufudumeza ioyile yeradiator.
-Broadband kunye neSatellite TV zisemgangathweni.
-Izinto eziluncedo zokubandakanya i-dishwasher, umatshini wokuhlamba, iayini kunye nesomisi.
- Indawo yokutyela inetafile yokutyela yabantu aba-4 yeendwendwe ezifuna ukuchitha ubusuku kunye nokutya okuphekwe ekhaya.
-Indawo yokuhlala inezihlalo ezitofotofo, umlilo wombane kunye ne-Smart TV. Yeyona ndawo ifanelekileyo yokuphumla kunye nokuziphumza emva kosuku oluxakekileyo lokujonga iNdlela ye-Wild Atlantic.
-Thweba kude kwaye uphuphe nakweyiphi na indawo yokulala emithathu entle enendawo enkulu yokugcina ekhoyo.
-Kukho igumbi lokuhlambela elikhulu langoku elinentloko yemvula empompelwe ishawari ecinezelekileyo kunye nenye ephuma kwigumbi lokulala elikhulu, umniniyo ubonelela ngejeli yeshawa, ishampu yokuhlamba izandla kunye neshampu yeendwendwe.
-Indlu icocwa ngokobuchwephesha phambi kotyelelo ngalunye kunye nendawo entsha, ilinen esemgangathweni yehotele kunye neetawuli ebhedini yakho ngaphambi kokufika.